ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်-ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ရဲလင်းရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၈)
ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်-ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ရဲလင်းရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၈)
by May Thingyan Hein on Sunday, October 28, 2012 at 8:24am ·
အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ရန်ကုန်မြို့။
မိတ်ဆွေများ အားလုံး အိပ်မက်ဆိုးများကနေ လွတ်မြောက်ကြပါစေ။
You, Ko Lin Wai Aung, ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ, Aung Than Nyunt Aungnilai and 16 others like this.
Zvve Oo လူမဆန်တဲ့ သူတွေဆီကနေ လွတ်မြောက်ရုံတင်မက အခုချိန်ထိ အမှန်တရားအတွက် အတိတ်တွေကို ပုံဖော်ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ စိတ်မကောင်းဖြစ် ဒေါသဖြစ်ရလို့ like မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
October 28, 2012 at 8:48am · Like · 9
Maung Win Who is beside ko tun aung kyaw?
October 28, 2012 at 8:53am · Like · 2
Immortal Roulette တောက် မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ ကောင်တွေ...
October 28, 2012 at 9:19am · Like · 1
Khin Soe Kyi I'm very much unliked,feeling very bad, nothing to say...
October 28, 2012 at 9:28am via mobile · Like · 1
Nay Myo Min ဒီလောက်လူမဆန်တဲံ့လူတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေရက်နဲ့ မတရားခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက် ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှ ဘာမှ လုပ်မပေးနှိုင်တော့ဘူးလားဗျာ
October 28, 2012 at 10:14am via mobile · Like · 5
HanWynn Htun ကျွန်တော်လဲ like မလုပ်တော.ပါဘူးဗျာ........
October 28, 2012 at 11:56am · Like · 2
မိုး စဲ ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ အညီလုပ်ခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့ သဘောနဲ့ သူတို့ လုပ်ခဲ့တာပါပဲ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလို ဥပဒေမဲ့ ကျူးလွန်သူတွေဟာ လက်ရှိ ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) ကို ဆက်လက်ဦးဆောင်နေကြတာဟာ တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါ တကယ့် ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေနဲ့ အညီ အရေးယူ ခံရခြင်း မရှိသေးပါဘူး..
October 28, 2012 at 5:01pm · Like · 8
Rita Lwin ရင်နာစွာနဲ့ ဖတ်တယ် ... ဖတ်ရင်းနဲ့ လဲနာကျင်စွာခံစားရတယ် ... ရဲဘော်ချင်းချင်းဒီလို လူမဆန်စွာလုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ကို နားမလည်နိုင်ဘူး ... သူတို့ တွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုံးဆိုရင် ... ဥပဒေနဲ့ အညီအရေးယူခံရမဲ့ နေ့ အမြန်ဖြစ်ပေါ်ပါစေလို့ 
October 28, 2012 at 6:24pm · Like · 6
October 28, 2012 at 9:35pm via mobile · Like · 1
Aung Win အပြစ်ရှိ့သူကိုအပြစ်မပေးနိုင်တာ သေးဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေအပေါ်တာဝန်မကျေမှု့ တစ်ခုပဲလို့ခံစာဒရတယ်
October 29, 2012 at 1:29am · Like · 6
Htar Htar Lwin >>Mg win ....he is ko ye lin.
October 29, 2012 at 1:36am · Like · 1
Kyi Lwin Oo ပါချောင် စခန်း မှာ ဖြစ်ခဲ့သမျတွေကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ဒါ မြန်မာလူမျိုးတွေမှ ဟုတ်ပါလေစလို့ ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်မိတယ်။
October 29, 2012 at 2:53am via mobile · Like · 3
Kyaw Kyaw Hein လူကမွေးတာမှမဟုတ်တာ သူတို့သားချင်းတယောက်ကိုတွေ့ထားပြီ ပြန်လုပ်ပြလိုက်မယ်
October 29, 2012 at 4:00am via mobile · Like
Cho Tu Zal ကျနော် ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သူတချို့က ကျနော့်ကို အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ရဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်တယ် လို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ခင်ဗျားက ဘယ်လောက်သိ၊ ဘယ်လောက်နားလည် လို့လဲ ဆိုပြီး ဆတ်ဆတ်ခါ ရန်တွေ့တာ ခံခဲ့ရတယ်။
တကယ်တမ်း စုံစမ်းကြည့်တော့ ၈၈ မှာ သူက အဖျားအနား ပါခဲ့တယ်။ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ဆိုပြီး သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သလိုလို နဲ့။
သူမသိတာက ကျနော့်ကို သာမန် ဗီဒီယိုဒါရိုက်တာ ခုမှ စိတ်ကူးပေါက်လို့ ဟိုအော် ဒီအော်နဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ လို့ အမြင်နဲ့ ဟန့်လိုက်တာ။
အဲဒီ ကိုရဲလင်း၊ ကိုစိုးလင်း၊ ရော်နယ်အောင်နိုင် တို့နဲ့ အတူအိပ်၊ အတူစား
ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ၊ ကျနော်ထောင်ထဲ ရောက်နေလို့သာ၊ နို့မို့ဆို မြောက်ပိုင်း
အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့အထဲ ပါမလား၊ တောင်ပိုင်း အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အထဲ ပါမလားပဲ။
ဒီလူတွေ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျနော်တို့မှ ၀ိုင်းဝန်းမဖေါ်ထုတ်ရင် ဘယ်သူတွေ
ပွဲ မပြီးသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဆုံးခန်းတိုင် မတရားမှုတွေ အာဏာရှင်တွေရဲ့ အဓမ္မမှုတွေကို ဆက်ဖေါ်ထုတ်ရဦးမယ်။
မတရားမှု ကို ဘယ်သူကပဲ ပြုပြု၊ ဘယ်ဘက်ကပဲ ပြုပြု ကျနော်တို့ ဖေါ်ထုတ်
October 29, 2012 at 4:41am · Edited · Like · 17
Aung Win Right cho too, we should do.
October 30, 2012 at 9:55am via mobile · Like · 2
November 6, 2012 at 11:05am · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:56 PM